ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စတေရှင် ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion-proof Starter Suppliers & Factory
BF28159-g စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဆားကစ် ဘရိတ်ကာ
FCDZ52 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဆားကစ် ဘရိတ်ကာ
6. ဆားကစ်ကို မကြာခဏ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထိန်းချုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် လမ်းအား ဝန်ပိုခြင်း၊ ရှော့တိုက်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။
DG58-DQ စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ (လျှပ်စစ်သံလိုက်စတင်)
6. ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်၏ ဝန်ပိုမှုနှင့် ဝါယာရှော့များကို အကာအကွယ်ပေးပြီး ဝန်အဖြစ် မော်တာအား စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊ မော်တာ၏ ရှေ့နှင့် နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်ပြီး မီတာသို့လည်း ပါဝါပေးပါသည်။